The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: 25-21 - News Ọchịchị
Isiokwu a na-akpọ “The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: 25-21” e dere site Keith Stuart na Jordan Erica Webber, n'ihi na theguardian.com on Monday 14 December 2015 12.30 UTC
Ọfọn, ọ bụ fọrọ nke nta Christmas, na ebube mgbe nile ntụrụndụ dere atụgharị echiche ha, ghara ezinụlọ na ndị enyi, ma na-akwụsị-nke-afọ ndepụta atụmatụ. ebe a mgbe ahụ, bụ anyị omenala rundown nke afọ- 25 kasị mma egwuregwu vidio, collated site anyị otu nke ndị nwere ahụmahụ egwuregwu so dee - tupu ha niile na-apụ n'anya n'ime a fug nke eggnog na Carol abụ abụ.
dị ka mgbe, ndia bu ndi-utu aha anyị ụtọ na afọ a, ọ bụghị ndị anyị chere na ha kasị groundbreaking ma ọ bụ ya dọọrọ widest oké egwu tokwara. Ọ bụghị ihe ma ọ bụ na nkà mmụta sayensị - ma ọ bụ mma ma ọ bụ ihe ezi uche.
agbanyeghị, anyị agaba, si 25-21. -Abịa azụ ụbọchị ọ bụla n'izu a n'ihi na ihe.
Atọ isi Efrata-eme ka elu ihe egwu na-Soma: a miri-oké osimiri ọnọdụ, mutated nnukwu anụ, na existential ụjọ. Ya n'aka, ọ bụ ezie na mbụ n'ime ha bụ underused na nke abụọ overused, nke atọ bụ iji na-ebu egwuregwu. Frictional ka ịtinye mgbe na-awụlikwa elu scares na ụda nke ihe a frantic obinku kpumkpum na-echetara gị na-enweta ụdị na-akpata nchekasị ozugbo egwu, ma ọzọ na-akpali nnọọ bụ nkà ihe ọmụma, psychological egwu na-egwuri si n'ime a kọrọ na jụrụ ajụjụ banyere onye njirimara. Onye ọ bụla maara na onwe onye na-atụgharị uche bụ ihe n'ezie na-arọ nrọ na-mere nke.
24. ruo mgbe Dawn (PS4)
Otu n'ime ndị kasị akpali akpali na otutu egwu utu aha maka a ọtụtụ afọ, Ruo mgbe Dawn na-ahụ Player na-agbalị ịnọgide asatọ enyi ndụ dị ka ha daba na a na n'ime ime obodo ọbịa na-ebi ebe nnukwu anụ idu ke ekịm. Jiri akọ na ijikọta ọcha nke Silent Hill na eje Ije Nwụrụ Anwụ, this interactive drama provides dozens of conclusions based on player actions – it’s a “butterfly effect” mechanic that points to interesting possibilities for the future of the action adventure.
Activision must have known from the very first days of Skylanders that Lego would eventually make its own game in the toys-to-life genre, and that it would be much better. Ka emechara, these aren’t just toys, they’re toys that fit into an existing longstanding category of toys, and they’re toys the players get to build themselves. Add to that the inclusion of multiple franchises, with a silly story that weaves through several of them, and this is the best Lego game yet, karịsịa (as always) when played with a friend.
Ori and the Blind Forest Foto: Microsoft
← Amazon akwusila hoverboards n'elu nchekwa ụjọ The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: 20-16 →